Pathological anatomy uye cytodiagnosis: chii icho uye nezvayo | Kuumbwa uye kudzidza
Pathological anatomy uye cytodiagnosis: chii icho uye nezvayo
Pathological anatomy uye cytodiagnosis: chii icho uye nezvayo. Tsvaga iyi mibvunzo mune chinyorwa. Chiyero che Mushonga Zvave kutonyanya kuoneka mumamiriro edenda. Iko panguva ino iripo apo vanhu vazhinji vakatora tsika nyowani dzine chekuita nekuchengetedza wega uye kugara zvakanaka.
Ivo vadzidzi avo vanoda kusimudzira basa ravo mumunda wehutano, vanogona kuongorora mafambiro akasiyana. Kana rako rehunyanzvi rakaenderana neiyi nongedzo, Tsvaga iyo yekupihwa kupihwa kwedzidzo dzakasiyana mayunivhesiti uye ehunyanzvi ekudzidzisa nzvimbo.
1 Tsvaga muzvikonzero uye kwakatangira zvirwere
2 Shanda mumunda wekutsvaga kwekurapa
Tsvaga muzvikonzero uye kwakatangira zvirwere
Munhu wacho anogona kuita zvidzidzo zvakasarudzika muhutachiona hweatomy uye cytodiagnosis. Ruzivo rwezvakakonzera uye shanduko yezvirwere zvakasiyana zvinopa ruzivo rwakakosha kuti uwedzere kuongorora. Nyanzvi dzinoshanda mundima iyi yehutano kufambira mberi mukuongororwa kwezvirwere zvakadzidzwa. Basa ravo harisi iro rebasa rakananga rekutevera-remurwereZvisinei, chinangwa chayo chakakosha kune vanachiremba. Naizvozvo, inoshanda pamwe nekubatana nevamwe nyanzvi.
Kazhinji, usati waona chaizvo kuti kuongororwa kwemunhu akabatwa nekusagadzikana chii, zvinodikanwa kuti uite bvunzo dzakasiyana uye kumirira mhedzisiro. Naizvozvo, bvunzo dzakagadzirwa mumunda wehutachiona hweatomy uye cytodiagnosis yakakosha kuwana mhinduro nezvezvimwe zvirwere. Vanobvumira kutumidza chikonzero. Icho chokwadi icho, kune rumwe rutivi, chine danho rekutsanangudza kurapwa kwakanyanya kuratidzwa.
Maitiro echirwere anowanikwa nemurwere anoratidzwawo munzvimbo yekushushikana. Kumwe kwekunzwa kuti avo vane kusagadzikana, asi vasingazive chaizvo kuti chii chiri chikonzero chinougadzira, kusava nechokwadi. Iko kusava nechokwadi uko kunogona zvakare kuve neruzivo mushure mekuziva iyo yakasarudzika kuongororwa. Asi yakasimbiswa data yakakosha kune avo vanowana ruzivo rwakakosha nezve yavo nyika.
Vanhu vanowana dzidziso inodiwa uye kugona kunodiwa kuti vashande mune hunyanzvi uhu vanobatana sechikwata munzvimbo dzehutano nemumabasa ekutsvaga. Kuburikidza neaya mapurojekiti umo nyanzvi dzakasiyana dzinotora chikamu dzinoongorora chinhu chekuongorora zvinoita kutsvaga zvitsva. Somugumisiro wekuonekwa kwechirwere chinogona kuitika, mukana wekucherechedza mamwe maitiro chaiwo anomuka zvakare. Semuyenzaniso, zvinogoneka maseru shanduko ayo ari pakatangira chirwere ichi. Naizvozvo, iyo nyanzvi ine ruzivo rwakakosha kuongorora sampuli dzakasiyana murabhoritari uye kushandisa zvishandiso zvinoratidzwa mune imwe neimwe nyaya.
Shanda mumunda wekutsvaga kwekurapa
Kutsvaga kwekurapa kwakakosha kuwana mhinduro nyowani mumunda wehutano kubva kwakasiyana maonero: kuongororwa, kurapwa kurapwa, uye kunzwisisa kwezviratidzo. Maitiro anokurudzira kufambira mberi kwakakosha munharaunda nekuti, pamwe nezvimwe zvinhu, zvinosimbisa kuwedzera kwehutarisiro hwehupenyu.
Iyo nyanzvi mune pathological anatomy uye cytodiagnosis inoita basa iro riri chikamu chechikamu chekurapa kwekurapa. Basa rehunyanzvi rinogona kuita sarudzo mumatanho akasiyana ehutano. Zvese mhedzisiro yakapihwa nehunyanzvi yakanyatso kusiyaniswa uye yakanyorwa.
Pathological anatomy uye cytodiagnosis: chii icho uye nezvayo. Nyaya dzatakanyatsoongorora muchinyorwa. Kune vamwe nyanzvi vanoitawo basa ravo murabhoritari. Mabasa anoitwa nehunyanzvi akabatana zvakananga nekusarudza kuongororwa. Bvunzo dzakaitwa dzakajekesa kupa zita iri nyaya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kuumbwa uye kudzidza » Studies » Jobho Kubuda » Pathological anatomy uye cytodiagnosis: chii icho uye nezvayo
Kufungidzira nyanzvi yekuongorora uye mishonga yenyukireya
Chii chinonzi thanatopraxia?